FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA WOLFSKY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Wolfsky
Husky / Irlandey Wolfhound Alika mifangaro
'Ity ny alikako Czar. Izy dia lakroa Wolfhound / Husky 5 taona. I Czar no alika sambatra indrindra hitako. Tiany ny mandeha mitsangantsangana, mitaingina fiara, mihazakazaka eny an-tokontany (ao anaty lanezy na ahitra), mitsangantsangana any anaty ala ary mankeny amoron-dranomasina (na dia matahotra ny rano aza izy ary tsy milomano). Rehefa ao an-trano i Czar dia tia mifampiraharaha amin'ny reniny, matory ary miezaha mangatsiaka. Tiany ny mandry eo amin'ny lavarangana fidirana amin'ny fahavaratra, mba hahafahany mijery izao tontolo izao mandalo fotsiny. Tena sariaka amin'ny olona sy alika hafa tiany indrindra ny ankizy izy. '
Ny alika Wolfsky dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Husky Siberia ary ny Wolfhound Irlandey . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Zazalahy lehibe i Czar, milanja 90 lbs eo ho eo. Mandeha an-tongotra 3-4 isan'andro izy, ary amin'ny faran'ny herinandro dia tianay ny mandeha mitsangantsangana na mandeha lavitra - dia mahafinaritra! Fahazaran-dratsy iray, mpihazakazaka izy !!! Tsy azoko atao ny mamela azy hiala amin'ny tadiny raha tsy any amin'ny faritra mimanda izy, satria izy horonan . Nanenjika azy im-betsaka aho, tsy nahafinaritra, ary haingana be izy ka tsy tratrako ka dia nijanona teo amin'ny tadiny i Czar. Nahazo an'i Czar tao amin'ny Fikambanana Humane teo an-toerana aho, izaho no sambatra nahita namana mahafinaritra toy izany. Tena tsara toetra i Czar ary tsara fitondran-tena. Hainy ny mipetraka, mijanona, mandry, matory ary avo dimy (ahetsiketsika lamba). Tanjony ny hampifaly olona. Faly sy afa-po fotsiny i Czar.
Czar the Irish Wolfhound / Husky mifangaro amin'ny 5 taona tia ny lanezy.
Czar the Irish Wolfhound / Husky mifangaro amin'ny 5 taona
Lisitry ny Alika Wolfhound Mix Dogs
Zavatra mpiandry ondry nanenjika Mix toetra
laboratoara sôkôla sy chihuahua mifangaro
sary anglisy Springer spaniels
laboratoara mavo manga heeler mix
ohatrinona ny habetsaky ny rà mandriaka